15 sawir oo muujinaya runta ka dambeysa sawir | Abuurista khadka tooska ah
Farshaxanka sawirku waa mid dabiici ah. Waxaa jiray sawirro waligood ku xardhan xusuusta malaayiin dad ah, oo aad mooddo inay u gudbiyeen hadal guud oo qof walba awood u leeyahay inuu fahmo oo qiimeeyo. Si kastaba ha noqotee, ka dambeeya sawirkaas xadaya waqtigeenna oo maskaxdayada la wareegaya, waxaa jira hannaan hal-abuur ah oo qarsoon ama ugu yaraan aan laga warqabin dadweynaha. Waxaa jira munaasabado, munaasabado naadir ah oo haa, oo muuqaal weyn si kadis ah loogu qaado ama iyada oo aan loo hoggaansamin istiraatiijiyad hal abuur hore loo qorsheeyay. Iskusoo wada duuboo, markaan kahadleyno dokumenteriyada ama sawir qaadista joornaalisteedka (taas oo ku saabsan faragalinta xaqiiqada laqabtay gebi ahaanba mamnuuc tahay), sawirada aan horteenna kuhayno waxay dhaafeen miirayaal aad uyar ama waxay heleen isbadal aad uyar. Laakiin runtu waxay tahay in sawirada xirfadlayaasha badankood badanaa leeyihiin a istiraatiijiyad isku dhafan. Adduunyada xayeysiinta iyo farshaxanka, wajiga qorshaynta iyo natiijada ka dhalata naqshadaynta fikirka ayaa aad muhiim u ah.
In badan kahor, saameynta ay tahay inay ku dhexjirto sawirka la wadaago ee la abuuray ayaa si qoto dheer looga fikirayaa. Waa inay ku jiraan nooc xaqiiqo ah oo is barbar socda oo awood u leh inuu kaligiis hadlo oo ku hadlo hadal cad oo la fahmi karo oo ka soo baxa luuqadda muuqaalka. Maanta waxaan arki doonnaa "dhabarka dambe" ee sawirro badan oo si fudud u soo jiita, oo laga yaabee markaan aragno hannaanka inay noqdaan sawirro xitaa soo jiidasho badan. Miyaadan u malayn?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sawir » 15 sawir oo muujinaya runta ka dambeysa sawir
Waad ku mahadsantahay wadaagida qalabkan! Waan jeclaa, waxaan ahay qof jecel sawir qaadista iyo naqshadeynta garaafka waxa igu soo jiitaana waa tafatirka sawirrada.
Ku jawaab alicia
GUUL FANKA WAA SIXIR, MAGAALO IYO XASAASAD.-
Waxay noqon laheyd mid xiiso leh, oo waxaan ku muujiyaa habkaas, in hal-abuurnimo badan oo aan u maleynayo inay sidoo kale ku jirto Venezuela, gacmo sixir ah, iyadoo la adeegsanayo sawirro wanaagsan, ay isu keeni doonto kala duwanaanshaha qaab hal abuur leh.
Waan ku salaamay qadarin.